All nkwekọrịta igwe nwere mgbochi ka ihe onye ọrụ nwere ike ime. Ichekwa ndabere data na Verizon gam akporo igwe pụrụ ịbụ ike ọrụ n'ihi ihe mgbochi ha amanye na ngwaọrụ. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ka ndabere gị data gị Verizon Android ekwentị na-enweghị na-aga site ọ bụla hassle. Ka anyị na-anya na ihe kasị mma n'ime ha dị ka e n'okpuru.
Wondershare MobileTrans Bụ ụzọ kasị mma ndabere gị Verizon Android ekwentị. Na Wondershare MobileTrans, ị nwere ike nyefee media faịlụ, oku na ndekọ, kọntaktị na ndị ọzọ gafee mobile sistem tinyere na nhọrọ ndabere gị smartphone ọmụma ka gị onwe gị PC, nke ga-abụ nnọọ bara uru na ihe omume gị mgbe nwere iji weghachi. Ọ bụ inweta, baa uru, ma na-akwado niile isi mobile sistem.
Nyefee ọdịnaya n'etiti Android, iDevice, WinPhone na Nokia Symbian na 1 Pịa.
Ndabere Android, iDevice, WinPhone na Nokia Symbian ekwentị data na kọmputa.
Nkwado 3000+ igwe na-agba ọsọ Android, Nokia Symbian na iOS.
Nyefee oku na ndekọ, music, foto, ederede ozi, omume na videos kama naanị kọntaktị nke smartphone.
Ụzọ dị ịtụnanya nyefee kọntaktị gụnyere ọrụ utu aha, adreesị email, aha nke sịrị na a otutu ihe.
Ọ bụ ndị kasị dịrị nchebe ụzọ ndabere gị data enweghị adịkwa ha na ndị data na-echekwara na-enweghị ihe ọ bụla mgbanwe mere na ya.
Nyefee ihe karịrị kọntaktị, oyiri n'etiti niile nke gị ngwaọrụ site na gị ederede ozi, ngwa, foto, oku na ndekọ na music dị nnọọ iji otu click.
Nyefee na multiple ngwaọrụ na Wondershare MobileTrans. Nyefee ozi ọ bụla ị chọrọ na-akọrọ n'etiti dị iche iche ngwaọrụ tinyere Symbian, iOS na Android.
Nkwekọrịta igwe na-na-akwado. Nyefee gị data n'agbanyeghị nke cell ọrụ nke igwe ị na-eji nwere.
Wondershare MobileTrans Akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ na ụdị ndị dị otú ahụ dị ka ozi kọntaktsị, Kalinda, Photos, Music, Video, Oku dekọọ na égwu wdg
Ị nwere ike iji Wondershare MobileTrans nkwado ndabere na mpaghara ogologo ndepụta ngwaọrụ (ihe karịrị 3000 na-kpọmkwem), ka ihe atụ, ọ na-akwado ma na-eme n'ụzọ zuru okè na ndị dị iche iche na ngwaahịa nke Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Sony, Google, Huawei, Motorola , ZTE na ndị ọzọ mobile emepụta. Ọ na-akwado ngwaọrụ dabeere na iOS, Android, Windows na Symbian sistem nnọọ mfe.
Dropbox nwere ike sị na-n'etiti n'elu Android ígwé ojii nkwado ndabere ngwa. Ọ bụ bu pụta ụwa na akpaka ndabere e ji mara na bụ ezigbo atụmatụ maka ndị ga-amasị ndabere ha oyiyi, videos nakwa dị ka ozi ndị ọzọ na-akpaghị aka maka mfe ohere e mesịa. Ọ na-akwado dị iche iche nyiwe dị ka Linux, Mac, Windows, iPad, iPhone, Android na blackberry. Dropbox nwere a elu ọrụ akpọ Dropbox Pro. The Pro bụ maka ndị chọrọ ibu nchekwa gbakwunyere ọ na-enye 1 TB nke nchekwa ndabara.
Mmekọrịta faịlụ dị mfe n'etiti gị na ngwaọrụ.
Dropbox akwado sistem na ndị dị iche iche mobile nyiwe dị.
Ọrụ anaghị-enwe nchegbu banyere na sava n'ihi na ha bụ anọgide online. Ọ dịghị Downtime.
The Dropbox omume bụghị ike na-guzobere.
Ọrụ nwere ike inweta ohere ka faịlụ na na-ehichapụ na mbụ nsụgharị nke Dropbox.
Mgbe ụfọdụ achọta faịlụ pụrụ isi ike na-eme ka faịlụ ike ịchọta.
Google Drive bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị mma na-eme mgbanwe ígwé ojii nkwado ndabere ọrụ na nza nke arụpụtaghị ihe. Ọ bụ free nakwa ị nwere ike niile nke gị faịlụ na ọ na-eji nke kọmputa, mbadamba na gị ama. Na Google Drive, ị nwere ike nwere ohere gị onwe gị videos, music, foto, akwụkwọ wdg na-kwadoo n'enweghị online. I nwekwara ike gbaa ndị ọzọ ume ele, dezie ma ọ bụ ịhapụ echiche ọ bụla nke gị faịlụ na Google Drive magburu onwe nkekọrịta ike.
Otu n'ime ndị kasị oké ọnụ ígwé ojii nkwado ndabere ọrụ dị taa.
15GB free nchekwa maka niile ọrụ.
Ahụkebe ngwọta ịkọrọ faịlụ n'etiti enyi, ezinụlọ na ibe.
Ọmụma dị nnọọ nta dị online maka ọhụrụ ọrụ na-ịmụta otú iji Google mbanye.
Ọrụ ike tinye okwuntughe ha faịlụ.
4. ndabere nnyemaaka site Verizon Ikuku
Ndabere nnyemaaka si Verizon Ikuku bụ a chekwaa na mma-ụzọ zọpụta gị dum akwụkwọ ndekọ. Kwadoo data nwere ike ibudata n'oge ọ bụla ọhụrụ gị ekwentị ma ọ bụ gị ugbu a ekwentị ma ọ bụrụ na i na mberede ehichapụ ya ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe na-eme ihichapu ya. I nwekwara ike ibudata na ngwa na gị smartphone ma ị nwere ike nweta gị zọpụta data na PC gị na ma ọ bụ Mac. Nke a bụ oké ụzọ mgbe ida gị akwụkwọ ndekọ ọbụna ma ọ bụrụ na ị hapụ ma ọ bụ imebi ekwentị gị. Ọ bụ nnọọ free na mfe iji. Iji na-enwe ọrụ a, mkpa ka i nwere a Verizon ngwaọrụ na akaụntụ.
Ọ bụ free na-adịghị achọ ka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ dị ka ogologo oge dị ka i nwere a Verizon wireless akaụntụ ma ọ bụ ngwaọrụ.
Ya Ọzọkwa akwado iche iche nyiwe na sistem.
Ọ na-bụ mfe ma dị mfe guzobere.
Ejedebeghị Verizon wireless ọrụ naanị.
Syncdroid bụ a free nkwado ndabere na mpaghara weghachite ngwá ọrụ maka android ngwaọrụ. Ọ na-eme a ala ndabere maka niile data gị android ngwaọrụ. Ọ na-akwado Windows PC na android ngwaọrụ. Na android ngwa, ọrụ nwere ike mfe na nkwado ma weghachite ha Android ngwaọrụ gaa na site na SD kaadị ma ọ bụ Dropbox.
Syncdroid-akwado ndị niile android faịlụ gụnyere videos, music, wdg
Ndabere ọsọ bụ ngwa ngwa tụnyere kasị ọrụ.
Ọ ọbụna awade synching ma ọ bụ akpaka ndabere ka Dropbox.
Ọ dịkwa mfe iji wụnye na-eji.
Onye ọrụ interface adịghị nwere ọtụtụ ihe na-enye.
> Resource> Android Data Recovery> 5 ngwọta na-ndabere Verizon gam akporo igwe